सानिमा माई हाइड्रोपावरको कात्तिकमा एजीएम, सेयरधनीलाई लाभांश (कति गते?) – OnlinePahar
२८ माघ २०७७, बुधबार ०९:५६ Basanta Khanal	0 Comments	Bonus share
काठमाडौं : सानिमा माई हाइड्रोपावरले लाभांश पारित गर्न कात्तिक ११ गते साधारण सभा बोलाएको छ । सभा सेलिब्रेसन हाइट सुकेधारा काठमाडौंमा हुनेछ । साथमा एकैसाथ भर्चुअल माध्यमबाट पनि सभा चल्नेछ । सभा बिहान ११ बजे सुरु हुनेछ । लगानीकर्ताले भर्चुअल माध्यम वा भौतिक रुपमा पनि सहभागी हुन सक्नेछन् । सभा प्रयोजनका लागि असोज १८ गते बुक क्लोज गरिएको छ । यसआधारमा असोज १७ गतेसम्म कायम सेयरधनीले लाभांश सुरक्षित गर्न सक्नेछन् । सानिमा माईले सभामा १०.५२% लाभांश दिने प्रस्ताव लैजाँदैछ । यसले गत वर्षको नाफाबाट १०% बोनस सेयर र कर तिर्न ०.५२% नगद लाभांश दिन लागेको हो । साधारण सभाले अनुमोदन गरेपछि लगानीकर्तालाई वितरण सुरु गरिनेछ ।
यो पनि पढ्नुहोस् : नबिल बैंकले अलग्गै संरचना दर्ता गरी मर्चेन्ट बंैकिङको काम सुरु गर्ने भएको छ । बैंकको सहायक कम्पनी नबिल इन्भेस्टमेन्ट बैंकिङ लिमिटेडलाई धिातोपत्र बोर्डले आउँदो सातासम्म अनुमति दिने भएपछि सो कम्पनीले काम सुरु गर्ने तयारी गरेको हो । ‘बोर्डबाट अनुमति पाएको केही समयभित्रै काम सुरु गर्छौं,’ नयाँ कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रवीणरमण पराजुलीले भने , हाल उनी नबिल बैंकको मर्चेन्ट बैंकिङ विभागका प्रमुखका रूपमा कार्यरत छन् । चुक्ता पुँजी सात करोड रहेको सो कम्पनीका सञ्चालकहरुमा चौधरी ग्रुपका निर्देशक निर्वाण चौधरी, बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अमृतचरण श्रेष्ठ र महाप्रबन्धक कपिल शर्मा रहेका छन् । चुक्ता पुँजी १० करोड रुपैयाँ रहेको कम्पनीमा संस्थापकहरूको ७० प्रतिशत लगानी रहेको छ । बाँकी ३० प्रतिशत अर्थात् ३ करोड रुपैयाँ सर्वसाधारणमा सेयर विक्री गरी उठाइने बताइएको छ ।
तेस्रो त्रैमाससम्म सवा खर्ब राजस्व चालु आवको तेस्रो त्रैमासिक अथवा चैत्र मसान्तसम्ममा रु. १ खर्ब २६ अर्ब ५२ करोड राजस्व संकलन भएको राजस्व सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले जानकारी दिएका छन् । गत आवको यसै अवधिमा रू ९८ अर्ब ६७ करोड राजस्व संकलन भएको थियो । चालू आवको तेस्रो त्रैमासिकसम्मको राजस्व संकलन अघिल्लो आवको सोही अवधिको भन्दा २८.२ प्रतिशत बढी हो ।
← पाथिभरा माताले हामीसबैको रक्षा गरुन, ३१ आश्विन २०७८ आइतवारको राशिफल पढौं
दसैँको समीक्षा : पर्वको अवधि छोट्याऔँ →